कपास सलेदो र paraffine मोम मैनबत्ती - चीन Litbright मोमबत्ती (शीजीयाजूआंग)
कपास सलेदो र paraffine मोम मैनबत्ती
आधारभूत जानकारी मोडेल कुनै .: G75-0450H प्रकार: Tapered सामाग्री: खुट्टाफिन मैन उपयोग: क्रिया कर्म, छुट्टी, स्पा, धर्म, विवाह, पार्टी, जन्मदिन, होम प्रकाश, सजावट प्रकार्य: प्रकाश रंग: सेतो स्वाद: Unscented साइज:7* 10cm समय जल: 8H प्रशोधन: मशीनरी विभिन्न आकार: राम्रो गुणस्तर थप जानकारी प्याकेजिङ्ग: उत्पादकत्व प्याकेजिङ्ग बक्से: प्रति दिन ब्रान्ड 30 टन: Litbright परिवहन: महासागर, भूमि, मूल को एयर स्थान: चीन आपूर्ति क्षमता:3× 20 'fcl प्रमाणपत्र: इस्वी संवत् BSCI Ou ...
मोडेल कुनै .: G75-0450H
विभिन्न आकार: राम्रो गुणस्तर
प्याकेजिङ्ग: बक्से प्याकेजिङ्ग
उत्पादकत्व: 30 टन प्रति दिन
प्रमाणपत्र: इस्वी संवत् BSCI
हाम्रो सामाग्री एक अन्य 70% मोम र 30% पाम तेल 100% खुट्टाफिन मैन छ। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरु सजावट लागि थोक सेतो स्तंभ मोमबत्ती, बहु-रंग घरेलू मोमबत्ती, सेतो उज्यालो मोमबत्ती, बहु-रंग उज्ज्वल मोमबत्ती, सेतो fluted मोमबत्ती, बहु-रंग fluted मोमबत्ती, सेतो घटना मोमबत्ती, बहु-रंग घटना मैनबत्ती समावेश गर्नुहोस्। हाम्रो मोमबत्ती सर्वश्रेष्ठ कच्चा माल को छन्, यी वस्तुहरू राम्रो गुणस्तर र उन्नत डिजाइन, ग्राहकहरु लोकप्रिय छन् जो को हुन्।
Litbright मोमबत्ती कारखाना नब्बे गत शताब्दीको स्थापित भएको थियो। मुख्य भूमि चीन मा कारखाना संग एक निर्माता, हामीले निर्यात मोमबत्ती को 10 वर्ष छ। हाम्रो कारखाना क्षेत्र बारे 48,000 वर्ग मीटर छ र हामी हेबै मा सबै भन्दा ठूलो मैनबत्ती निर्माताहरु मध्ये एक हो। हामी 800skilled भन्दा कार्यकर्ता र 40 टेक्नीसियन छ। उत्पादन क्षमता हाम्रो:4× 20 'कन्टेनर / दिन। यी वस्तुहरू राम्रो गुणस्तर र उन्नत डिजाइन, ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छन् जो को हुन्। हाम्रो उत्पादनहरु अमेरिका, युरोप, अफ्रिका र अष्ट्रेलिया, आदि असी भन्दा बढी देशहरुमा निर्यात गरिएको छ।
पैकिंग अघि फिक्सिंग मा सामान्य निरीक्षण
तेस्रो पक्ष निरीक्षण: स्वीकार्य
हरेक दोषपूर्ण उत्पादन वा गुणस्तर समस्या (transporation समयमा क्षति बाहेक) अर्को क्रममा प्रतिस्थापन हुन सक्छ।
कुनै पनि बिग्रेको उत्पादन वा गुणस्तर समस्या जो ग्राहकको घाटा कारण आफ्नो अर्को क्रममा क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ।
अघिल्लो: सेतो घरेलू मैनबत्ती
अर्को: धार्मिक स्तंभ सेतो मैनबत्ती
मैनबत्ती निर्माताहरु सेतो घटना मोमबत्ती
100% हात सुरुचिपूर्ण टेपर मोमबत्ती पोखे